အဖြူရောင် အ၀တ်အစားတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးများ
အဖြူရောင်အ၀တ်အစားသစ်တွေ၊ အဖြူရောင်အတွင်းခံတွေ ၀ယ်လာပြီး ၀တ်လို့ သိပ်မကြာခင်မှာ အ၀ါရောင်ပြောင်းလာတာ၊ အစွန်းအထင်းတွေ ဖြစ်လာတာ လူတိုင်းကြုံကြရမှာပါ။ ချွေးနှင့် ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးတွေအားလုံးက ဒီအခြေအနေကို ပိုပြီးဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အ၀တ်တွေကို ခဏခဏ ပြန်လျှော်ရတာကို မနှစ်သက်ပါဘူး ။ အ၀တ်တွေအားလုံးလျှော်ပြီးလို့ အစွန်းအထင်းများ ကျန်နေရင် စိတ်အနှောက်အယှက်အများဆုံးဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အဖြူရောင်အ၀တ်အစားတွေ၊ ဇာဘရာစီယာနှင့် အတွင်းခံတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတစ်ချို့ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်အဖြူရောင်အ၀တ်အစားများကို ဓါတုပစ္စည်းမသုံးပဲ သစ်လွင်တောက်ပစေဖို့
အ၀တ်လျှော်တဲ့အခါ ရော်ဘာလက်အိတ် ၀တ်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်လက်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဆား စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
ဆပ်ပြာမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း လိုအပ်ပါတယ်။
ရေထဲမှာ ဆပ်ပြာ၊ ဆိုဒါနှင့်ဆားကို ဖျော်ပါ။ ၁၅မိနစ်လောက် သင့်ရဲ့အဖြူရောင် အ၀တ်အစားတွေကို စိမ်ထားပါ။ အ၀ါရောင် အစွန်းအထင်းတွေက အရမ်းများလျှင် မိနစ် ၃၀လောက် စိမ်ပေးထားပါ။
ပြီးနောက် သင့်လက်တွေနဲ့ လျှော်ဖွပ်ပေးပါ။ တတ်နိုင်သလောက် ညင်ညင်သာသာ အစွန်းအထင်းတွေကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ အစွန်းတွေကို အရမ်းပွတ်တိုက်တာက အမှားတစ်ခုပါ။
ပြီးနောက် သန့်ရှင်းသောရေနှင့် ကောင်းစွာ ဆေးကြောပြီး အခြောက်ခံပါ။ အရေးကြီးတာက Radiator ပေါ်မှာ အရောင်ဖျော့အ၀တ်အစားတွေကို အခြောက်မခံပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်စရာ အများစုက ဖယ်ရှားဖို့ခက်ခဲတဲ့ အ၀ါရောင်အစက်အပြောက်တွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဆိုဒါ စားပွဲတင်ဇွန်း ၆ဇွန်း
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
အမိုးနီးယား စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း လိုအပ်ပါတယ်.
ရေထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ပျော်ဝင်သွားအောင် ကောင်းစွာ ရောမွှေပေးပါ။ သင့်ရဲ့အဖြူရောင် ဘရာဇီယာ သို့မဟုတ် တီရှပ်နှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကို ၃နာရီလောက် ထည့်စိမ်ထားပါ။ ပြီးနောက် သင့်လက်ဖြင့် လျှော်ဖွပ်ပြီး အခြောက်လှန်းထားပါ။
အရေးကြီးတာက ဒီနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါက လေ၀င်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ သင့်အ၀တ်အစားတွေကို အရောင်ချွတ်တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြတင်းပေါက်များကို ဖွင့်ထားပါ။ အငွေ့တွေကို မရှုပါနဲ့။
သင့်ရဲ့အဖြူရောင်ဘရာ တွေ အ၀ါရောင် အစွန်းအထင်းတွေ မဖြစ်အောင် သေချာကူညီနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့က
၁။ အဖြူရောင်အ၀တ်တွေကို သီးသန့် သိမ်းထားပါ။
၂။ deodorant အသုံးပြုတဲ့အခါ ခြောက်သွားတဲ့ အထိ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ သင့်ရဲ့ဘရာစီယာကို ၀တ်ဆင်ပါ။
၃။ အဖြူရောင် အ၀တ်အစားတွေ အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ။
၄။ သင့်ရဲ့ အဖြူရောင် အတွင်းခံအ၀တ်အစားတွေကို ရေပူနှင့် မလျှော်ပါနဲ့။ မီးခိုးရောင် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
၅။ စက်နဲ့လျှော်တာထက် လက်နဲ့လျှော်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
အဖွူရောငျအဝတျအစားသဈတှေ၊ အဖွူရောငျအတှငျးခံတှေ ၀ယျလာပွီး ၀တျလို့ သိပျမကွာခငျမှာ အဝါရောငျပွောငျးလာတာ၊ အစှနျးအထငျးတှေ ဖွဈလာတာ လူတိုငျးကွုံကွရမှာပါ။ ခြှေးနှငျ့ ခြှေးနံ့ပြောကျဆေးတှအေားလုံးက ဒီအခွအေနကေို ပိုပွီးဆိုးရှားစပေါတယျ။ ဘယျသူမှ အဝတျတှကေို ခဏခဏ ပွနျလြှျောရတာကို မနှဈသကျပါဘူး ။ အဝတျတှအေားလုံးလြှျောပွီးလို့ အစှနျးအထငျးမြား ကနျြနရေငျ စိတျအနှောကျအယှကျအမြားဆုံးဖွဈရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့အဖွူရောငျအဝတျအစားတှေ၊ ဇာဘရာစီယာနှငျ့ အတှငျးခံတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့ ရိုးရှငျးသော နညျးလမျးတဈခြို့ကိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အဝတျလြှျောတဲ့အခါ ရျောဘာလကျအိတျ ၀တျထားခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့လကျတှကေို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ဆား စားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျး
မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ စားပှဲတငျဇှနျး ၃ဇှနျး
ဆပျပွာမှုနျ့ စားပှဲတငျဇှနျး ၁ဇှနျး လိုအပျပါတယျ။
ရထေဲမှာ ဆပျပွာ၊ ဆိုဒါနှငျ့ဆားကို ဖြျောပါ။ ၁၅မိနဈလောကျ သငျ့ရဲ့အဖွူရောငျ အဝတျအစားတှကေို စိမျထားပါ။ အဝါရောငျ အစှနျးအထငျးတှကေ အရမျးမြားလြှငျ မိနဈ ၃၀လောကျ စိမျပေးထားပါ။
ပွီးနောကျ သငျ့လကျတှနေဲ့ လြှျောဖှပျပေးပါ။ တတျနိုငျသလောကျ ညငျညငျသာသာ အစှနျးအထငျးတှကေို ပှတျတိုကျပေးပါ။ အစှနျးတှကေို အရမျးပှတျတိုကျတာက အမှားတဈခုပါ။
ပွီးနောကျ သနျ့ရှငျးသောရနှေငျ့ ကောငျးစှာ ဆေးကွောပွီး အခွောကျခံပါ။ အရေးကွီးတာက Radiator ပျေါမှာ အရောငျဖြော့အဝတျအစားတှကေို အခွောကျမခံပါနဲ့။ ဖွဈနိုငျစရာ အမြားစုက ဖယျရှားဖို့ခကျခဲတဲ့ အဝါရောငျအစကျအပွောကျတှေ ရရှိလာပါလိမျ့မယျ။
ဆိုဒါ စားပှဲတငျဇှနျး ၆ဇှနျး
ဟိုကျဒရိုဂငျြပါအောကျဆိုဒျ စားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျး
အမိုးနီးယား စားပှဲတငျဇှနျး ၂ဇှနျး လိုအပျပါတယျ.
ရထေဲမှာ ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကို ပြျောဝငျသှားအောငျ ကောငျးစှာ ရောမှပေေးပါ။ သငျ့ရဲ့အဖွူရောငျ ဘရာဇီယာ သို့မဟုတျ တီရှပျနှငျ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီတှကေို ၃နာရီလောကျ ထညျ့စိမျထားပါ။ ပွီးနောကျ သငျ့လကျဖွငျ့ လြှျောဖှပျပွီး အခွောကျလှနျးထားပါ။
အရေးကွီးတာက ဒီနညျးလမျးကို ရှေးခယျြပါက လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့နရောမှာ သငျ့အဝတျအစားတှကေို အရောငျခြှတျတာ ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွတငျးပေါကျမြားကို ဖှငျ့ထားပါ။ အငှတှေ့ကေို မရှုပါနဲ့။
သငျ့ရဲ့အဖွူရောငျဘရာ တှေ အဝါရောငျ အစှနျးအထငျးတှေ မဖွဈအောငျ သခြောကူညီနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခြို့က
၁။ အဖွူရောငျအဝတျတှကေို သီးသနျ့ သိမျးထားပါ။
၂။ deodorant အသုံးပွုတဲ့အခါ ခွောကျသှားတဲ့ အထိ စောငျ့ဆိုငျးပွီးမှ သငျ့ရဲ့ဘရာစီယာကို ၀တျဆငျပါ။
၃။ အဖွူရောငျ အဝတျအစားတှေ အတှကျ ထုတျလုပျထားတဲ့ ဆပျပွာကို အသုံးပွုပါ။
၄။ သငျ့ရဲ့ အဖွူရောငျ အတှငျးခံအဝတျအစားတှကေို ရပေူနှငျ့ မလြှျောပါနဲ့။ မီးခိုးရောငျ ပွောငျးလဲသှားပါလိမျ့မယျ။
၅။ စကျနဲ့လြှျောတာထကျ လကျနဲ့လြှျောတာက ပိုကောငျးပါတယျ။